रुसद्वारा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु, थुप्रै ठाउँमा बम बिस्फोट, नेपालीहरुको अवस्था केछ ? — Sanchar Kendra
रुसद्वारा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु, थुप्रै ठाउँमा बम बिस्फोट, नेपालीहरुको अवस्था केछ ?
काठमाडौँ । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन छिमेकी मुलुक युक्रेनमा सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेका छन्। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार पुटिनले बिहीबार पूर्वी युक्रेनमा सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेका हुन्।
पुटिनले सैन्य कारबाहीसँगै युक्रेनका सैनिकलाई आत्मसमर्पण गर्न माग गरेका छन्। सैन्य कारबाही घोषणा भएसँगै युक्रेनका विभिन्न भागमा बिस्फोटहरू भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनिओ गुतेरेसले पुटिनलाई आफ्ना सैनिकहरूलाई रोक्न शान्तिका लागि प्रयास गर्न आग्रह गरेका छन्।
पुटिनको यो घोषणासँग रूस र युक्रेनको तनाव नयाँ चरणमा पुगेको छ। पुटिनले रूसी र युक्रेनी सेनाबीचको लडाइँ अवश्याम्भावी भइसकेको र यो कहिले हुन्छ भन्ने बाँकी रहेको बताएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले संसारभरका मानिसहरूको प्रार्थना युक्रेनीका लागि भएको उल्लेख गर्दै पुटिनले यो अन्यायपूर्ण कदमको मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएका छन्।
‘यो आक्रमणबाट हुने मृत्यु र क्षतिको एक्लो जिम्मेवार रूस हुनेछ। संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका मित्र राष्ट्रहरूले एकतावद्ध र निर्णायक तरिकाले यसको जवाफ दिनेछन्। संसारले रूसलाई जवाफदेही बनाउनेछ,’ बाइडेनले भनेका छन्। रूसको पछिल्लो कदमबारे बाइडेनले अमेरिकी नागरिकलाई आज सम्बोधन पनि गर्दैछन्।
नेपालीहरुको अवस्था केछ ? जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का यसो भन्छन, उनकै शब्दमा जस्ताको त्यस्तै:
गैरआवासीय नेपाली संघ र लामो समयदेखि युक्रेनमा रहेका नेपालीसँग मैले त्यहाँको अवस्थाबारे बुझेको छु । एनआरएनएका अध्यक्ष हरिबहादुर मल्ल र जयन्तकुमार नेपालसँगको सम्पर्कबाट केही नेपालीहरूको लिस्ट प्राप्त भएको छ ।
एनआरएनए अध्यक्षबाट जम्मा ३८ जनाको लिस्ट पायौं । फेरि थप ४४ जना सम्पर्कमा आउनु भएको छ । उहाँहरू सबैको सूची हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पाठसकेका छौं । यो सूची दुई दिनको हो ।
अरु थप सम्पर्कमा आउने क्रम जारी छ । यहाँ कति नेपाली हुनुहुन्छ भन्ने आधिकारीक सूचना केही छैन । सबैले अनुमान गर्ने हो । मेरो अनुमानमा १५० जना हुनुहुन्छ होला ।
हामीले सम्पर्कमा आएका जति व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सञ्जाल र हामीलाई उपलब्ध ह्वाट्सएम नम्बरमा ट्राभल एड्भाइजरी जारी भएको सूचना पनि पठाइसकेका छौं । त्यही सूचना त्यहाँको गैरआवासीय नेपाली संघमा पनि पठाएका छौं ।
हालसम्म हेर्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइसकेको छैन । नाकाबन्दी लाग्ने स्थिति छ तर सैन्य कारबाही हुने स्थिति छैन । पछि के हुन्छ थाहा छैन । अहिलेको अवस्थामा दुई राज्य डोनेट्स्क र लुहान्सकबाहेक अरु ठाउँमा समस्या देखिएको छैन । जहाँ समस्या देखिएको छ ती क्षेत्रमा नेपाली नै छैनन् । त्रास र चिन्ता बढेको मात्रै हो ।
सामान्यतया उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको पाइएको छ । हवाई सेवा भने युक्रेनबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले बन्द गरेको सूचना आएको छ । युक्रेनमा डाक्टर, विद्यार्थी र श्रमिकहरू हुनुहुन्छ । जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पहिलेको जस्तै सामान्यरुपमा काम गर्ने गरिराख्नु भएको छ । कतिपय डाक्टरहरूको पढाइ सकिएको छ । प्रयोगात्मक अभ्यास भने बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमै अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय उहाँहरूको छ । उहाँहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकै डाक्टरसापहरू हो ।
मैले विद्यार्थी र काम गर्नेहरू गरी ४५ जना भएको ठाउँमा पनि कुरा गरेको थिएँ । मलाई जानकारी गराएसम्म उहाँहरूमध्ये कोही ६ महिना, कोही २/३ महिनाअघि त्यहाँ पुग्नु भएको रहेछ । उहाँहरूले यतिका पैसा खर्च गरेर आएका छौं, अहिले नै फर्किनुपर्ने त होइन होला भन्ने कुरा गर्नु भएको छ । बरु हामीहरूलाई तपाईंहरूको के हो भन्ने खालको कुरा गर्नु भएको छ ।
मैले पनि तपाईंहरू जहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँ त्यस्तो क्रिटिकल अवस्था त छैन होला भनेर सोधेको थिएँ । मेरो जानकारीमा पनि त्यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । अब भविष्यमा पर्न सक्ने अप्ठेरोका लागि तपाईंहरूको विष्तृत जानकारी राख्न लागेका हौं भनेको छु ।
यदि कोही नेपाल फर्किन चाहेमा टिकटको कुरा हुन्छ । राज्यले त यतिका व्यक्तिलाई टिकट दिन गाह्रो हुन्छ । तर अझै उहाँहरूको भनाइ के छ भने काठमाडौं त जाने त्यहाँबाट घर त जानु पर्‍यो भन्ने छ । बरु त्यो व्यवस्थाका लागि हामी भनौंला भनेको छु ।
कतिपय त वैदेशिक रोजगारीको लागि स्वीकृति लिएर आउनुभएको होला भनेर सोधेको थिएँ । यस्तो कुरा गर्दा उहाँहरूमध्ये आधा स्वीकृति लिएर आएको, आधा स्वीकृति नलिएर आएको भन्ने कुरा आयो ।
मैले सम्पर्क आएका व्यक्तिहरूलाई सम्झाएको छु चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनेर । सान्त्वना पनि दिएको छु । यदि तपाईंहरू नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ भने तपाईंहरूले त्यही अनुसारको तयारी गर्नुहोला भनेको छु ।